Khuculula ushukela emzimbeni
UNGAWATHAKA ngolamula noma uwafake i-cucumber amanzi uma ufuna ukuwashintsha ukunambitheka kwawo
NJENGOBA abantu bebezitika ngamakhekhe nezibiliboco ezinoshukela, kuzoba nzima ukubuyela emfuthweni wokuqala konyaka emsebenzini, ezikoleni nakokunye, ushukela umandla egazini.
Yingakho ongoti bethi lesi yisikhathi sokuwukhuculula ungaze ukugulise.
Bathi iSugar Detox yinto ebalulekile ngalesi sikhathi sonyaka ukuze ugweme nokugula okuhambisana nakho.
Babalula nokuthi uma ubuzitika ngokudla okunoshukela kakhulu isikhathi eside, okungaba yinyanga yonke, ungaba senkingeni njengomuntu obhema kakhulu ugwayi, nosebenzisa izidakamizwa ezinhlobonhlobo.
Ungoti endleleni yokudla, uCarrie Forrest, uthi ukudla okunoshukela kuhlala kuhaleleka futhi kulula nokukudla ngokukhulu ukunganaki. Yize kunjalo kodwa ukhuthaza ukuthi umuntu ahlale awuhlanze umzimba akhiphe ushukela ongesenasidingo.
“Umzimba unezinto eziningi ezisebenza njengamathuluzi okuzihlanza wona. Kodwa ungagqilazeka uma sewuthwele ukungcola okuningi noma sekufanele ukhuculule konke ukungcola okusegazini.
“Kubalulekile ukuhlala uwulekelela umzimba ngokuwuhlanza unciphise ushukela ngokudla okune-fiber, amanzi nokuzivocavoca,” kusho uCarrie.
Eqhuba lo ngoti uveze ukuthi uma umuntu ezinakekela ngendlela futhi esebenzisa nesikalo sikashukela esifanele ngisho nomqondo wakhe uhlala uphapheme.
AKUBE neqanda namakinati nemifino ukudla kwakho okudla phakathi nosuku ukuze kuvale le ndawo ehalela ushukela Isithombe: PINTEREST
“Okunye okwenza kubaluleke ukuhlanza umzimba kulekelela nomqondo ekutheni ukwazi nokulawula ngendlela izinga nesikalo sikashukela umzimba wakho osifanele.
“Akudingeki ukuthi kuze kube wumuntu okhonze kakhulu ushukela onakekela umzimba wakhe kodwa wonke umuntu uyadinga ukwehlisa nokuthatha ikhefu ekudleni okunoshukela,” kusho uCarrie.
Izindlela ongazisebenzisa ukuzihlanza
* Qala wenze uhlelo lwezinsuku eziyishumi ezizoba nezikhathi zokudla, ukuphuza amanzi, ukuzivocavoca nokuphumuza umqondo nomzimba.
* Phuza isikalo samanzi ngokwanele, amanzi azokulekelela ukuhlanza umzimba ngendlela egculisayo aphinde ashiye nomzimba wakho unamanzi anele, akhiphe ukungcola okusalele ngayizolo.
* Qinisekisa ukuthi njalo ngosuku uyazivocavoca, noma ngabe wenza izinto ezincane njengokuthatha uhambo oluzokwenza uphume endlini noma uqwale izitebhisi. Ukujuluka kubalulekile ngalesi sikhathi, ngena noma kwi-sauna uzigqume umzimba.
* Hambela kude nezicoficofi ezizokulinga ugcine sewudla izinto ezinoshukela ozama ukuwuhlanza emzimbeni.
Okungenani kususe kungabi khona endleleni ukuze noma uhala ungaze ulingeke.
Izinyathelo ongazilandela zikusebenzele
* Uma unxanelwe iziphuzo ezinoshukela, qinisa kakhulu emanzini, ungawafaka no-cucumber noma ulamula.
* Nyusa isikalo sokudla okunezakhamzimba nemisoco efanele, ukudla okunamafutha ayimpilo njengofishi, coconut, avocado amakinati nama-seeds nakho kubalulekile ngalesi sikhathi.
* Ukudla okuqukethe i-glutamine okuyisakhamzimba esitholakala kakhulu ezithelweni nemifino kumele nakanjani ukudle ngalesi sikhathi ngoba umzimba uhlala uyidinga i-glutamine kwazise awukwazi ukuzikhiqizela yona.
* Izithelo akube ezivunwe esihlahleni nezingafakwanga izikhuthazi. Iningi lalezi zithelo likahle ngoba liqukethe ifayibha odingekayo emzimbeni okubalwa amajikijolo, ama-aphula nezinye.
* Isidlo sakho sasekuseni asibe nawo ama-protein, okungenani abengu-30 grams hhayi ngaphansi.
* Ungakhohlwa wukuthi zonke izinhlobo zokudla zibalulekile njengama-carbohydrates, ungawashintsha ngokudla ubhatata nenyama noma imifino nenyama uma ubalekela uphuthu nojeqe.
* Ukudla okunganakekile njengamaqanda, amakinati, amakhekhe anama-almond ayasiza ukuvala indawo yokuhalela ukudla okunoshukela omningi.
* Ungavumeli ukhwantalala ngoba luzokwenza uthembele ekudleni okunoshukela kakhulu, zama nokulala ngesikhathi ukuze umzimba usebenze ngokwanele.
* Uma uvuka ngakusasa ekuseni qinisekisa ukuthi asikho isidlo sosuku oseqayo futhi zonke uzidla ngesikhathi esifanele.